Ezibunxantathu olubuxande Iphiramidi umthamo sokubala, i-calculator kwi-intanethi, umguquleli
Ezibunxantathu olubuxande Iphiramidi umthamo sokubala ikuvumela ukuba ufumane umthamo iintlobo ezahlukeneyo iiphiramidi, ezifana ezibunxantathu, uxande naziphi na ezinye iintlobo iiphiramidi, ngokuthi iifomyula ezahlukeneyo.
Uhlobo yephiramidi unyuse ubalo
Xa indawo isiseko Kuba iphiramidi rhoqo polygonal Kuba iphiramidi rhoqo elingunxantathu Kuba iphiramidi rhoqo uxande Kuba tetrahedron
Ubude: Indawo Base:
Ubude: Icala Base: Inani emacaleni base:
Ubude: Icala Base:
Pheleni kwe tetrahedron:
Iphiramidi into emacala yenziwa ngokuthi uyidibanise isiseko polygonal kunye a Incopho, ebizwa enkcochoyini. Ngamnye ngohlangothi isiseko kunye nefom ngamafelandawonye unxantathu, ngokuba ubuso osecaleni. Yinto eqinileyo gqiba noseko polygonal. —
h - Ukuphakama yephiramidi
S - Ummandla base
Iphiramidi rhoqo na iphiramidi rhoqo ogama nesiseko yipolygon.
a - Icala base
n - Inani icala isiseko
Iphiramidi elingunxantathu rhoqo na iphiramidi kunye unxantathu lasekunene-ijike xa noseko lwalo extruding ukuya kwindawo enye.
Iphiramidi rhoqo buxande na iphiramidi kunye square kwisiseko kwaye ubuso oonxantathu ayisoselisi ngokulinganayo.
Tetrahedron into emacala elakhiwe yobuso ezine ezibunxantathu, elintlangothi ezintandathu ngqo, kunye neekona ezine ivertex.
a - Pheleni kwe tetrahedron